Cup Mascots World Waxaad u sheeg History of FIFA World Cup c
Ugu horeeyay abid ee World Cup iyo Ooyintii hore kor u muujiyeen intii lagu World Cup 1966 ee England. Cup kasta oo adduunka ayaa tan iyo markii uu lahaa iyo Ooyintii gaar ah ku xiran dalka marti, 13 oo ka mid ah ilaa iyo haatan.
Noocooda, Libaaxa, calaamad caadiga ah ee United Kingdom
Sida ugu horeysay Ooyintii in ay galaan goobta koobka adduunka, World Cup Willie loo doortay si ay u matalaan United Kingdom. Libaax waa xayawaan calaamad United Kingdom (xitaa kooxda Ingiriisi waxaa lagu naaneeso 'The Three Lions "), iyo maaliyada waxaa loo qorsheeyay si ay u muujiyaan calanka United Kingdom ereyada WORLD CUP waxa ku jira. Waxaa loogu talagalay by Reg Hoye.
Noocooda: Wiil Mexico caadiga ah la caadiga ah Sambrero ah
The fashion World Cup iyo Ooyintii ahaa in ay sii wadaan sida Mexico u doortay inuu raaco leh wiil caadi Mexico, isagoo xiran maaliyada Mexico iyo koofiyad caadi ahaan loo yaqaan Mexico Sombrero Mexico 70 qornaa ee matalaya koobka aduunka. Magaciisa ka yimid Juan, sida mid ka mid ah magacyada Isbaanish ugu badan loo isticmaalo ee Mexico. Waxa uu sidoo kale aan eed lahayn iyo si cadaalad ah ee koobka adduunka ah oo aan kaar oo casaan ah ayaa la isticmaalay.
Talo iyo Tubada
Noocooda: Laba wiil caadiga Jarmal xiran maaliyada Germany
Wixii koobka adduunka ee 1974, marti Germany ayaa sidoo kale u doortay inuu raaco taageerayaasha qaranka caadiga ah sida Mascots. Labada taageerayaasha la doortay sida ugu caadi ahaan raadinaya taageerayaasha Jarmalka oo ka dhigan Germany East iyo West Germany labadaba. Iyadoo WM 74 u taagan Weltmeisterschaft (Koobka Adduunka), labada mascots oo loogu tala galay siinta kasta oo kale si ay u abaabulaan wada noolaanshaha, midnimada, iyo si cadaalad ah.
Noocooda: Argentine An xiran hat, guntay, iyo karbaashka, kuwaas oo caadiga ah ee Gauchos ee Argentine
Sida la sii wado dhaqan mascot ay u isticmaalaan Dad sida mascot, Gauchto loo doortay sida Ooyintii oo ka mid ah 1978 koobka aduunka ee lagu qabtay Argentine. Gauchito ka dhigan tahay wax yar Gaucho, kaas oo kuu sharaxaya degan caadiga ah South American. Waxa intaa dheer in hat, guntay, iyo karbaashka, kuwaas oo dhan calaamadaha caadiga ah ee Gauchos, waxa uu sidoo kale xirto maaliyada Argentine iyo "Argentina 78" Waa qoran tahay uu hat matalaya koobka aduunka. Farsamada yaabka leh laygu, Gauchito waa ku wajahan bini'aadamka ee ugu danbeysay ee loo isticmaalo sidii oo ay tahay mascot Koobka Adduunka.
Noocooda: orange ah, midho caadiga ah ee Spain, isagoo sita xirmo kooxda qarankeena ah
Sida wakiil ka socda dalka martida loo yahay, Orange loo doortay sida Ooyintii ee Spain ay sabab u tahay iyagoo midho caadiga ah ee Spain. Magaca Naranjito ka yimid Naranja, taasoo la micno ah orange ee Spain. Naranjito waxaa loo arkaa mid ka mid ah shaqsiyaadka ugu caansan Koobka Adduunka mascots taariikhda weli, iyo inuu isagu lahaa uu cartoon u gaar ah sannadkii 1982 ilaa 26 dhacdooyin oo ah 20 daqiiqo la abuuray.
Noocooda, basbaas A jalapeno ay tahay dhaqan uu Mexico cunnada, la shaarbo iyo xiran sombrero ah
Si aad uga duwan Juanito (Mexico 1970), basbaas jalapeno ah loo doortay qayb ka wakiil ugu caadiga ah loo isticmaalo cunnada ay Mexico u kulul yihiin sida. Its magaca ka yimaadaa picante taas oo macnaheedu yahay basbaaska basbaaska iyo suugada ee Spain. The shaaribada iyo sombrero sidoo kale wakiil dhaqan dalka Mexico halka maaliyada loo doortay in uu noqdo cas oo ay sabab u tahay iyagoo cagaaran adag tahay in la kala saaro, iyo in ay sidoo kale ka dhigan tahay calanka Mexico ah.
Noocooda: Ciao waa Salaan Talyaani classical
Ciao la midna cunto la xiriira Koobka Adduunka mascot hore ma aadanaha gadisan oo ay FIFA. Marka laga reebo magaca iyo midabkiinaba, mascot ma la xidhiidha dalka ay martida u yihiin oo dhan. Ciao loola jeedaa labada hello iyo nabad gelyo ee dalka Talyaaniga, iyo ulo ayaa muujinaya sida "ITALY" haddii si dhow ula eegay. Doorashada dhawaan soo jeediyay in Ciao ma ahaa mid aad loo jecel yahay marka la barbar dhigo kale Cup Mascots Adduunka.
Weeraryahan, ee Pup Koobka Adduunka
Noocooda: Ey sida caadiga ah US Butros
Markii ugu horeysay abid, xayawaan waxaa loo isticmaalay sida World Cup iyo Ooyintii ee United States. Xirashada ah maaliyada Red, White, iyo Blue si ay u matalaan dalka Maraykanka, Weeraryahanka, ee Pup Koobka Adduunka, waxaa la doortay si ay u dadka ku boorinaynaa in ay daawadaan iyo ogaadaan Soccer, taas oo aan US ee aad loo jecel yahay. Dogs waa xayawaanka rabaayada ah ee ugu caansan ayaa looga mahadinayaa in United States, ayaa sidoo kale iyaga ku muteystay ah "nin saaxiibkiis ugu fiican" epithet.
Noocooda, diiqii baa sida calaamad qaranka Faransiiska, halka magaca ka yimaadaa isku dhafka ah ee kubada cagta iyo Asterix
Sida astaanta qaran iyo astaan ​​dhaqanka ee France (French xataa National Flag ku jira diiqii), diiqii baa loo doortay in uu noqdo World Cup iyo Ooyintii ee France 1998. Magaca Footix ka yimaado isku dhafka ah ee kubada cagta iyo Asterix, taas oo Faransiis ah Geesigii maadda ah. Iyada oo uu saaxiibtinimo dhoola, Footix mid ka mid ah mascots ugu xusuusta badnaa ee taariikhda koobka aduunka ee ahayd, wax badan si uu noqday caan ah.
Ato, Kaz, iyo Nik
Country: South Korea iyo Japan
Noocooda: khalqiga computer-ahbaa higayaa sida xubno ka mid ah koox ka mid ah "Atmoball" (Ciyaar kubada cagta sida khayaalka)
Ooyintii / s ugu kala duwan oo u gaar ah u yimid intii lagu jiray koobka adduunka ee 2002 ee South Korea iyo Japan, qaab sugan oo dhul socoda computer-ahbaa higayaa. Ato, Kaz iyo Nik - ama isugu yeedhay Spheriks ah - ahaayeen magacyada doortay iyada oo cod ah taageerayaasha kubadda cagta ee adduunka oo dhan. In kasta oo ay qaraabo lahayn dalalka ay martida u yihiin, warkooda si kastaba ha ahaatee ugu gaar ah intay ku nool yihiin kale loo yaqaan Atmoball qorshe oo ay ku ciyaaraan ciyaar la mid ah kubada cagta. Waxay sidoo kale taxane ah oo 26 dhacdooyin in magacooda, laakiin ay la doortay sida ay ugu yaraan caanka ah ee la soo dhaafay 5 Koobka Adduunka Mascots 2006.
Noocooda, Libaaxa iyo kubad hadlaya, halka magaca waa isku dhafka ah ee gool iyo gool libaax
In kasta oo xayawaan isku waxaa loo isticmaalay sida World Cup iyo Ooyintii ka hor, Goleo IV si kastaba ha ahaatee uu ahaa mid aad loo jecel yahay iyo tan kaalinta koowaad ka kasbatay in codbixintan ee 2006. Sida a 7.5 feet tirada Kalvebod Brygge "dhab ah", magaca Goleo ee ka timaada aabbihiis oohin dhiiri ee "Go Leo Go "intii uu kubada cagta. Waxa uu sidoo kale ku weheliyay kubada cagta hadal la odhan jiray "Pille", oo wax walba waa ogyahay, waxaa jira in ka ogaato kubada cagta.
Noocooda: shabeel, caadi ahaan laga helo South Africa, oo magiciisana waxaa la isku dhafka ah ee za (South Africa) iyo Kumi (oo macnaheedu yahay 10 oo ku qoran luqado kala duwan oo Afrikaan ah)
Noqonaya dugaagga muujiyey sida koobka aduunka ka dib markii Mascots Germany ee mascot dhabta ah, Zakumi ahaa xoolaha 5aad ee taariikhda koobka aduunka. Sida xoolaha ah laga helo ee South Africa, Zakumi waxaa la abuuray oo sida shabeel waa faraxsan, lama filaan ah, adventurous, hakaga, oo jecel yahay inuu Doqon dadka si aan waxba galabsan oo fiican. Magaca Zakumi ka yimaadaa za u South Africa iyo Kumi taasoo la micno ah 10 luqado badan oo Afrika. Iyada oo uu timo cagaaran la caseeyey si ay u matalaan garoonka kubadda cagta iyo "kulanka Zakumi waa Fair Play" hal ku dhiga, Zakumi ka dhigan iyo astaan ​​ruux South Afrika, juqraafiga, iyo dhaqanka.
Noocooda: A-tilmaamay saddex Armadillo ah noocyada nugul helay Brazil. Its magaca ka yimaadaa Football iyo Ecology
Cup iyo Ooyintii Adduunka ee Brazil 2014 ayaa sheeko si buuxda u gaar ah iyo ujeedada. SADDEXDA-ku tilmaamay Armadillo magacaabay "Fuleco" loo doortay sida Brazil noocyada hooyo taas oo ka heli dhow in ay dabar go'aan. Xirashada cad t-shirt, Fuleco waxaa loo abuuray in ay keenaan Brazil ee noole iyo sidoo kale Saddex-ku tilmaamay Armadillo ee nuglaanshaha dareenka. Magaca Fuleco yimaado sida isku dhafka ah ee kubada cagta iyo Ecology.
> Resource > Video > Cup Mascots World Waxaad u sheeg History of FIFA World Cup